पर्वत काँग्रेसका नेता तथा उम्मदेवारले एउटै स्वरमा भने “बामगठबन्धनका उम्मेदवार पनि सहयात्री हुन,सवैले सालीन रुपमा चुनावी प्रचारप्रसार गरौं ” – MeroJilla.com
सावधान ! यी १० व्यवहार भएका ब्यक्तिको साथ तुरुन्त छाडिदिनुस्
प्रहरीलाई ओलीको धम्कि :’हाम्रो सरकार बन्दैछ कुर्सीबाट उठाएर फाल्छौं’
रामचन्द्र पौडेलको प्रश्नः संविधान मास्न खोज्ने प्रचण्ड र केपी ओली कसका छोरा हुन् ?
सै पनि एमाले लेखेका एक नारायण भण्डारीले यस्तो गित काँगे्रसको लेखे पुरा भिडीयो सहित
नेपालमा सक्रिय पुरुष वेश्यालयः कति कमाउन पुरूष वेश्या ?
किन एमालेले बन्द गरायो अरुण तेस्रो ? मतदान गर्नु अघि यो भिडियो हेर्नुस्
काँग्रेस प्रति यूवाहरुको आकर्षण वढेको वढ्यै
भारतको प्रहरी प्रमुख कार्यालय मै गोली हानेर पत्रकारको हत्या, गोली हान्ने प्रहरी जवान थुनामा !
पर्वत काँग्रेसका नेता तथा उम्मदेवारले एउटै स्वरमा भने “बामगठबन्धनका उम्मेदवार पनि सहयात्री हुन,सवैले सालीन रुपमा चुनावी प्रचारप्रसार गरौं ”
१८ कार्तिक २०७४, शनिबार ०७:५१
पर्वत १८,कात्तिक ।
पर्वत काँग्रेसका नेता तथा आसन्न निवार्चनका उम्मेदवारहरु अकंमाल गर्दै भने हामी जनताको सच्चा सिपाही हुन चाहाँन्छौ । नेपाली काँग्रेसको पार्टी कार्यलयमा आयोजित चुनावी कार्यक्रमको छलफल गर्दै उनीहरुले सो कुरा बताएका हुन । प्रेस युनियन पर्वतका अध्यक्ष,संरक्षक तथा पत्रकार ओम प्रसाद घायल सहितका प्रेस युनियनका सदस्यहरु माँझ उत्त कुरा बताएका हुन ।
ंसो छलफल कार्यक्रममा बोल्दै नेपाली काँग्रेसका केन्द्रीय सदस्य,पुर्व सांसद अर्जुन प्रसाद जोशीले हामी सालीन र सहि तरिकाले चुनावी प्रचारप्रसारमा जानुपर्ने कुरा बताउनुभयो । उहाँ पर्वतमा लगातार तीन,तीन पटक प्रतिनिधी गरेका ब्यत्ति हुनुहुन्छ । उहाँले सवैको सपाना पुरा गर्न आफुले पनि फरक फरक किसीमका योजनाहरु निमार्ण गरेको बताउनुभयो ।उहाँलाई समर्ग पर्वतवाट संघको उम्मेदवार हुनु नेपाली काँग्रेसले जिम्मा लगाई सकेको थियो ।
यस्तै उम्मेदवार पर्वत क प्रदेशका एवम नेपाली काँग्रेसका पुर्वपार्टी सभापती नवराज गुरुङले हामी सवै एक हुनाले काँग्रेस कार्यकर्तामा उर्जा मिलेको बताउनुभयो । उहाँले विगतमा काँग्रेसलाई अमर राख्न जेल जानु परेको अनुभव समेत सुनाउनुभयो । आम पर्वतवासी जनताको सुख शान्ति समिद्धि त्यो दिनमा आउँछ,जुन दिन हाम्रो विजयी हन्छ । उहाँले स्थानीय चुनावमा हामीमा यस्तै एकता भएको भए हाम्रो लोकतन्त्रमा कसैले हस्तक्षप गर्नु सक्दैन्थयो समेत भन्नुभयो ।
अर्का उम्मेदवार पर्वत ख प्रदेशका राजेन्द्र तिवारीले मैले लामो समय सम्म पर्वतका जनता सम्क्ष भिजन चाहेको समेत बताउनुभयो । उहाँले सानै उमेर देखि काँग्रेसका नेताहरुसंग सगै बिकासको मेरुदण्डको रुपमा काम गरेको अनसभव सुनाउनुभयो । भुक्मपको वेला पनि पर्बतका हरेक बिद्यालयका कम्पीयुटर,राहात दिने काममा लागेको बताउनुभयो । सो छलफलमा समानुपाती तर्फका पुर्वपार्टी सभापती लालकाजी गुरुङ,महिला नेत्री ललीतकला गुरुङ र पार्टी सभापपती खिम प्रसाद भुषालले पनि बोल्नुभएको थियो ।
प्रहरीलाई ओलीको धम्कि :’हाम्रो सरकार बन्दैछ कुर्सीबाट उठाएर फाल्छौं’	६ मंसिर २०७४, बुधबार १९:४५
रामचन्द्र पौडेलको प्रश्नः संविधान मास्न खोज्ने प्रचण्ड र केपी ओली कसका छोरा हुन् ?	६ मंसिर २०७४, बुधबार १९:३७
नेपालमा सक्रिय पुरुष वेश्यालयः कति कमाउन पुरूष वेश्या ?	६ मंसिर २०७४, बुधबार १८:२९
किन एमालेले बन्द गरायो अरुण तेस्रो ? मतदान गर्नु अघि यो भिडियो हेर्नुस्	६ मंसिर २०७४, बुधबार १८:२०
काँग्रेस प्रति यूवाहरुको आकर्षण वढेको वढ्यै	६ मंसिर २०७४, बुधबार १८:११
भारतको प्रहरी प्रमुख कार्यालय मै गोली हानेर पत्रकारको हत्या, गोली हान्ने प्रहरी जवान थुनामा !	६ मंसिर २०७४, बुधबार १८:०२
मन्त्रिपरिषद्को निर्णयः एडीबीको १५ अर्ब सहायता स्वीकार गर्ने
दुई चरणको निर्वाचनमा यस्तो छ बिद्यालय बन्दको कार्यतालिका
चुनावीसभाका लागि कांग्रेस नेता रामशरण जाने ठाउँमा सुतली बम
आजको सर्बाधिक क्लिक
ब्रेकीङ न्युज : बागलुङकी सम्झना भोलीको बिवाह त्यागेर भागीन पुरा भिडियो
यसरी रुँदै दौडिएर अस्पताल पुगिन् प्रकाशकी श्रीमती बिना, प्रचण्ड पनि रुँदै पुगे अस्पताल
एक विहानै पर्वतमा पुजारीको रहस्यमय मृत्यु
स्थानीय चुनावको ह्याङओभर, विद्यासुन्दरका कारण बाम गठबन्धन खतरामा
अमेरिकी विशेष विमान किन घुम्दैछ नेपाली आकासमा ? गन्तब्यमा हिँडेका याुत्र लामो समय विमानस्थलमा
काँग्रेसले सहयोग नगर्दा खतरा रहेको -प्रचण्ड,‘पर्वतका सबै ढुंगा औषधी हुन’-ओली
पर्वतका अधिकासं बामईलाका भत्काएर काँग्रेस नेता अर्जुन जोशी सदरमुकाम फिर्ता
मेरोजिल्ला डट कम द्वारा संचालित रेडियो स्विस नेपाली
४ .दिपिका भुसाल - इजराईल
५ .चिसाङ शेर्पा ( मलेसिया )